पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्र’क’र’णमा श्रीमान्नै अहिले शंकाको घेरामा ! – Hamrosandesh.com
पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्र’क’र’णमा श्रीमान्नै अहिले शंकाको घेरामा !
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना कार्की डेढ साताअघि घरभित्रै मृ त अवस्थामा फेला परेकी थिईन । उक्त घ टना मा घरको कामदार पनि मृ त अवस्थामा भेटिएका थिए जसले गर्दा यो घ टना थप रहस्यमय बनेको थियो । पछिल्लो अनुसन्धान क्रममा प्रहरीको हात थप नयाँ तथ्यहरु फेला परेको जनाईएको छ ।